एउटै छवि मा चन्द्र पछाडिको र भूमि | Apg29
एउटै छवि मा चन्द्र पछाडिको र भूमि
चिनियाँ उपग्रह Longjiang-2 एउटै छवि मा फिर्ता चन्द्र र भूमि फोटो खिंचवाने।
मा चन्द्र को छवि र पृथ्वी नै छवि4चिनियाँ उपग्रह Longjiang-2 चन्द्र पछि छ थियो फरवरी 2019. र तल्लो दायाँ कुनामा धेरै सानो देखिन्छ कि पृथ्वी फोटो खिंचवाने।
चन्द्र गरेको टाढा पक्षमा अवतरण
पछिल्लो महिना दुर्लभ मा एक अमानवचलित वाहन संग चीन उतरा फिर्ता पक्ष चन्द्र भनेर कहिल्यै धरती देख्न को। अब, एक चिनियाँ उपग्रह एक नयाँ फोटो दुवै सारा राउन्ड आकाशीय चन्द्र पछि देखेको शरीर मा एक दुर्लभ नजर कब्जा।
छैन यसलाई आकर्षक छ! परमेश्वरले सृष्टि विशाल ब्रह्माण्ड मा, त्यहाँ हामी मानिसहरूलाई बाँचिरहेको नीलो ग्रह छ।
र परमेश्वरले हामीलाई यो ग्रह मा मानिसजातिले देख्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रत्येक त्यसैले उहाँले येशू हाम्रो पापको गलत लागि मर्न पठाउनुभयो धेरै प्रेम गर्नुभयो। जब हामी येशूको vinfrälsta र सुरक्षित हुन्छ प्राप्त प्राप्त,
Longjiang-2 बाट छवि आकार मात्र 16 किलोबाइट्स थियो तर डाउनलोड गर्न लगभग 20 मिनेट लाग्यो। मूल छवि बैजनी तर थप वास्तविक रंग गर्न सही रंग छ।
माथिको चित्र चिनियाँ DSLWP बी / Longjiang-2 उपग्रह बोर्ड मा क्यामेरा लगियो। यसलाई हामी केही लागि देखेको छ कि देशमा संग चन्द्र पहिलो तस्वीर हुन सक्छ फिर्ता सँगै अन्य चिनियाँ अन्तरिक्ष यान , चांग 'ई 5T1, एउटै छवि छ जो 2014 मा दुई आकाशीय शरीर को एक तस्वीर लिए।
चन्द्र र पृथ्वी फुट्छ
त्यहाँ चन्द्र गरेको टाढा पक्ष को र हाम्रो नीलो ग्रह पृथ्वी अन्य चित्रहरू छन्।
जुलाई5मा, 2016 महाकाव्य एक फोटो खिंचवाने तस्बिरहरू को श्रृंखला धरती देखि देखेको कहिल्यै छ कि शून्य देखि। तपाईं धरती पृष्ठभूमिमा घुमाउँदा छ जसमा तस्बिरहरू एक देख्ने माथि।
Vecka 21, torsdag 23 maj 2019 kl. 23:19